UTOR 4 UTHANDO KUNYE NENDUDUMO YOMHLA WOMOYA, ISICWANGCISO, ISIQENDU, ITREYILA KUNYE YINTONI ESINOKUYILINDELA KWIKAMVA? - IIMUVI
I-Thor 4: Uthando kunye neNdudumo zaqinisekisa ukufika kwayo kwiComic-Con 2019. Iphawula into ebalulekileyo kuChris Hemsworth's Thor,
I-Thor 4: Uthando kunye neNdudumo zaqinisekisa ukufika kwayo kwiComic-Con 2019. Iphawula into ebalulekileyo kuChris Hemsworth's Thor, oba ligorha lokuqala leMarvel ukuba abe neemovie ezine zodwa.
Kodwa ayisosona sizathu siphambili sokuba abalandeli bavuye. Kwi Thor 4, uTaika Waititi uza kubuya. Izakubuyisa kwakhona uJane Foster kaNatalie Portman. Kuphela ngeli xesha njengeTor female.
Umhla womoya: Uthando lwengxolo kunye neNdudumo
Ekuqaleni Thor: Uthando kunye neNdudumo yayimiselwe ukukhutshwa ngo-Novemba 5, 2021.
Ifilimu yesine ye-Thor emva koko yahanjiswa yaya ku-18 kaFebruwari, 2022, emva koko kwabakho iindaba ezimnandi, kwaye ukukhutshwa kwadluliselwa phambili NgoFebruwari 11, 2022 .
libonakala nini ixesha le-3 liphuma kwi-netflix
UWititi ukholelwa ukuba ukulibaziseka kokuqala kumdlalo bhanyabhanya njengento elungileyo njengoko kumnika ixesha elingakumbi lokusebenza kwifilimu.
Umlingisi: Uthando Lwezandi kunye neNdudumo
UChris Hemsworth uya kuba ibuya njengeThor kunye noNatalie Portman njengoJane Foster.
Ukucaca, akazukuba ngomnye nje uJane, kwaye uya kuba yinguqulelo yabasetyhini iThor.
uhlaselo lwetitan release date season 2
Iqaqambisa ukubonakala kukaPortman okokuqala kwi-MCU emva Thor: Ihlabathi elimnyama ubuyele kwi2013. Nangona kukho imifanekiso kaJane kwi Abagibeli: Umdlalo wokugqibela , Uye wanika kuphela incoko yababini malunga nemifanekiso ephindaphindwe ngokutsha malunga Umhlaba oMnyama.
UTessa Thompson uza kubuya njengoValkyrie kwindima yakhe entsha njengenkokeli yeNew Asgard.
UThompson ukwathe uChristian Bale uza kuba lityala kumdlalo bhanyabhanya wesine. Xa kuthelekiswa, uVin Diesel ubhengeze ukuba i-Guardians yeGalaxy iya kuba yinxalenye.
Kukwakho nesizathu sokwenene sokuba nethemba lokuba imovie yesine inokuzisa abalandeli abathandayo iBeta Ray Bill. Uninzi lukholelwa ukuba mhlawumbi uChristian Bale uzakudlala umlingiswa, kodwa akukho mntu uqinisekisileyo ngezi ndaba.
Abanye abanokubuyela kubalingisi banokubandakanya uLoki Hiddleston's Loki kunye noMark Ruffalo njengoNjingalwazi Hulk. Okwangoku, ekuphela kwento ethembileyo ababukeli ngayo kukuba u-Waititi uza kuvakalisa uKorg othandwayo ngabalandeli.
Isiza: Uthando lweNdudumo kunye neNdudumo
Ngokungena komfazi Thor kwi-MCU , UWetaiti utyhile into. Uthatha inkuthazo yefilimu evela kuthotho lweeMarvel Comics UMandla onaMandla .
ixesha lokuphambukela kwexesha langaphandle 3
Ifilimu iya kuphinda inyathele kwimvelaphi yomntu othandwayo nguKorg.
Kwividiyo yokusasaza ngqo kubalandeli, u-Waititi no-Thompson baveze iinkcukacha ezithe kratya malunga neskripthi, apho bayilwa khona ezine okanye ezintlanu, kubandakanya nookrebe bendawo. Ewe, ookrebe bendawo!
Nangona kunjalo, ubunzima bomcimbi sisibhengezo sikaJames Gunn sokuba i-Guardians ye-Galaxy 3 yenzeka emva koTh: Uthando kunye neNdudumo, kuzisa umbuzo wokuba uThor ubashiyile nini abaGciniweyo kwihambo yakhe.
I-Thor inokwenza isalathiso kuyo kwi-movie yesine, ecaleni kwe-cameo kwi-Guardians 3 . Kodwa oku kukuthelekelela nje kuthi.
Ikharavani: Uthando lweNdudumo kunye neNdudumo
Kunye Imuvi ungaphumi de kube ngu-2022, ngokunokwenzeka, asizukubona mifanekiso de kube yiComic-Con 2021 kwangoko.
Kude kube kukhutshwa, qiniseka ukuba uhlala ujonge uhlaziyo lwamva nje kunye nokukhululwa kwetreyila. Kuze kube ngoko, uxolo kwiintsapho ezimangalisayo!
phakathi kwechungechunge lwe-TV yexesha 2
I-anime engaphezulu kwexesha elitsha
manga njengombulali weedemon
iikhathuni ezithandwayo zama-2000
hayi uyandibona 3
amarhamncwa amnandi kunye nokubafumana phi
zingaphi izilwanyana ezithandekayo eziza kubakho